Gaashaandhiga Soomaaliya oo dhisaya 28.000 kun oo askari oo awood leh sanadaha soo socda – Radio Daljir
Gaashaandhiga Soomaaliya oo dhisaya 28.000 kun oo askari oo awood leh sanadaha soo socda
Nofeembar 2, 2013 4:43 b 0
Muqdisho, November 2, 2013 – Wasaaradda gaashaandhiga ee Soomaaliya ayaa daaha ka rogtay in ay dejiinayso qorshe lagu diyaarinayo ciidan Soomaaliyeed oo awood leh saddexda sano ee soo socota, si awood loogu yeesho in la iska difaaco waxyaabaha khatarta ku ah dowladda.
Wasiirka gaashaandhiga ee Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Maxamuud Fiqi oo saxaafada la hadlay, waxaa uu sheegay in ay arintaas qayb ka tahay qorshe ay dowladdu ku doonayso in ay ku sugto amniga dalka oo idil, si loogu helo ciidan xoog badan.
?Qorshaha saddexda sano ee soo socota aan ku rajo waynahay ayaa ah in aan dhisno 28.000 kun oo Askari si aan u hanano amniga guud ee dalka.? Ayuu yiri wasiirka gaashaandhiga ee dalka Soomaaliya mudane Fiqi.
Wasiirka ayaa sheegay in ciidankaas loo dhamaystiri doono dhamaan tasiilaadka kala duwan ee ay u baahan yihiin, mudane Fiqi waxaa uu si cad u sheegay in amaan xumida dalka ka jirta ay qayb ka tahay tayada hoosaysa ee ciidanka dowladda Soomaaliya.
Ururka al-shabaab oo bedelay xubnaha sar sare ee maamulkiisa gobollada Baay iyo Bakool